Sri Lanka Tour from Bhubaneswar | Wac lambarka: + 91-993.702.7574
Bandhigyada Safaaradda Sri Lanka
Sri Lanka, oo horey loo yiqiin Ceylon, waa jasiirad yar oo ku taal koonfurta Hindiya, badweynta Hindiya, laakiin taasi waa wax yar oo ku saabsan waddanka quruxda badan. Iyada oo Sri Lanka Tour ka baqda Bhubaneswar, waxaad ka heli doontaa in ay u maraan goobaha neefta ee Sri Lanka. Muuqaaladeeda kala duwan ayaa ka soo jeeda goobaha roobka iyo lafaha qalalan ee dalal wanaaga iyo xeebaha ciidda. Waddanku wuxuu ku faanaa ilbaxnimada qadiimka ah, xeebaha ciidda ee dahabka ah ee leh caleen qumbaha, buuraha, iyo dhirta iyo shaaha. Iyadoo Sandbirdhiga Sandbalka 'Sri Lanka Tour uu ka yimid Bhubaneswar, waxaad heli kartaa dhammaan khibradaha maskax-barbaarinta sahaminta sahaminta Sri Lanka. Intii aad booqan lahayd jasiiradda, waxaad arki doontaa dhismaha gumeysiga laga bilaabo maalmaha Isbaanishku, Dutch iyo Ingiriisi. Waxaad arki doontaa maroodi farabadan, qaar ka mid ah oo ka qayb galaya xafladaha maxalliga ah iyo leopards ee duurjoogta duurjoogta ah. Sri Lanka waa wadan aad u qanacsan oo ku saabsan taariikhda, dhaqanka iyo dhaqanka. Wixii dalxiisayaasha jecel inay markhaati ka noqdaan taariikhda meel kasta, Sri Lanka waxay ku siinaysaa saddexagal dhaqameed. Safarka Sri Lanka ee ka yimaada Bhubaneswar ayaa kugula tagi doona waxyaabo fiican oo dabiiciyan ah in la bixiyo. Sri Lanka sidoo kale waxaa loo yaqaanaa xeebaha caanka ah iyo qorraxda dahabka ah ee sanadka oo dhan ku shiraaya. Sri Lanka waxay ku faantaa qaar ka mid ah Baagaga Qaran ee Qaran sida Yala National Park, Wilpattu National Park, Madasha National Park, Udawalawe National Park iyo Horton Planes. Safarka Sri Lanka ee ka yimaada Bhubaneswar ayaa kuu oggolaan doona inaad sahamiso jannada yar ee Badweynta Hindiya.
Waxay leedahay wax ay ku soo bandhigto nooc kasta oo dalxiis ah - Jacaylka dabiiciga ah, carruurta, maskaxda ama nooc kasta oo kale. Kobaca dalxiiska ee Sri Lanka wax calaamad ah uma laha in la joojiyo si dhakhso ah ama ka dib. Ku qor buugagaaga Sri Lanka hadda.
Code Code: 1001
DAY 01: KATUNAYAKE - KANDY - 115 Kms 2.5 Saacadaha
Ku imow Garoonka Caalamiga ah ee Bandaranaikiya, Katunayake oo uu soo dhaweeyay "Spiceland Colombo" una wareejin hoteelka Kandy via Pinnawala.
Booqashada Elephant Yaryar, Pinnawala:
Korsashada - guri maroodi ah oo da 'kala duwan iyo quudin kala duwan, maydhasho, wada ciyaarid iyo xitaa mate. Kuwaas waxaa la helay dhaawac ama ka tagay cidlada. Waxaa jira xitaa dhallaan yaryar oo ku dhasha maxaabiis.
Waqtiga waqtiga ee Agoonta Agoonta ah:
08.30am Furitaanka xarunta agoonta ee booqashada
09.15am Shukacad-quudinta maroodiga ilmaha
10.00am waaberiga subixii 'Ma Oya'
Xawaaladaha 12noon waxay dib ugu noqdaan agoonta kadib qubeyska
01.15pm Foosto-quudinta maroodiga ilmaha
02.00pm Wicitaanka duhurka galabnimo ee 'Ma Oya'
04.00pm Maroodiga ayaa ku soo laabanaya agoonta ka dib waaskada
05.00pm Foosto-quudinta maroodiga ilmaha
06.00pm Xiritaan agoonta booqdayaasha
Spice Garden ee Hingula (Kandyan Spice 99):
Waxay ku taallaa wadada ugu weyn ee u dhaxeysa Colombo iyo caasimada Kandy. Booqo beerta xayawaanka Hingula ee Mawanella si aad u aragto noocyo badan oo dhir udgoon Sri Lanka waa caan. Qoraxda, Cardamom, Pepper, Cloves iyo nutmeg ayaa ku beeray meeshaas. Marka laga reebo dhirta shakhsi ahaaneed, hantida ayaa iibisay muuqaalkeeda gaarka ah ee budada Sri Lankan.
Macbadka Iridda Nadiifka, Kandy:
Macbadka Iridda Sacuudiga ah ee Buddha waa macbadka ugu muhiimsan ee Budhistaanka Sri Lankan waxaana lagu dhisay qarnigii 16th ee AD King by King Wimaladharmasooriya, oo keliya ujeedada guriyeynta iligga.
Qado iyo Casho habeenku joogayo hoteelka Kandy.
Quraacda Hotel ee Kandy & ka baxaya Nuwara Eliya iyada oo loo marayo Peradeniya iyo Ramboda.
Tani waxa ay ahayd beer lagu farxo oo ah King Kandyan ee qarnigii 16 century kadibna lagu sameeyay beerta Botanical inta lagu jiro xukunka Britishka.
Saacadaha shaqada: 7.30am - 5.00pm (maalin walba)
Maqaayada iyo makhaayadaha: 10.00am - 5.00pm
Museum of Gem ("Tiesh" by Lakmini):
Tiesh oo si rasmi ah loogu yaqaan Lakmini Pvt Ltd wuxuu ahaa halyeey halyeey ah oo dhagaxyo qaali ah iyo qalab dahab ah oo dahab ah oo tayo wanaagsan leh sanadka oo dhan. Qaar ka mid ah dhagaxyada qaaliga ah ee Sri Lankan ayaa ku dhuftay aduunka oo dhan waa Blue Sapphires, Star Sapphires, Rubies, Star Rubies, White Sapphires, Yellow Safar, Mats Eye, Etc.A muraayadaha Sri Lanka. Fikrad ahaan waxaa ku yaala wadnaha Sri Lanka oo ku yaal magaalo qurux badan oo ku yaal Kandy "Tiesh" wuxuu qabaa dhammaan qaybaha macaamiisha. Tiesh oo Lakmini ka mid ah ayaa ku jirta muraayadaha casriga casriga ah ee dahabiga ah tan iyo markii la aasaasay 1997.
Shirkadda 1500 waxay ka sarreysaa heerarka badda ee ku taal wadnaha Labookellie Estate, oo ah mid ka mid ah warshadaha shaaha ee Sri Lanka, maanta waa meel caan ah oo caalami ah oo ciriiri ku jirta oo fursad siinaysa in ay la kulmaan shahwada Mackwoods sida ugu fiican ee ay ugu habboon tahay iyo sidoo kale bixinta wax barista ee wax soo saarka ee Shaah Ceylon. Xarunta Labookellie Tea Dejiya oo muddo dheer calaamad u ahayd dadka degaanka iyo dalxiisayaasha Nuwara-Eliya oo ka yimid Kandy si looga jawaabo shuruudaha beerta cusub ee tayada Labookellie. Xarun Tea ah ayaa la ballaariyey laguna dayactirey si ay u siiso martida badan iyo macaamiisha si fiican u adeega meel aad u raaxo leh. Mackwoods waxay bixisaa dadka soo booqda oo leh safar lacag la'aan ah oo lagu soo bandhigay warshadda Labookellie shaaha, waayo-aragnimo waxbarasho oo ku saabsan geedi-socodka shaaha iyo geedi-socodka wax-soo-saarka.
Meelaha qulqulaya oo si deg deg ah hoos ugu dhaadhacaya, kaymaha dhaadheer iyo dooxooyinka qaxwaha Cagaarshow, ayaa yar yar oo isku dhafan oo ku yaala bartamaha dhexe, waxay dhalaan qaar ka mid ah biyaha Sri Lanka ee ugu sarreeya, taas oo mid ka mid ah "Ramboda Waterfalls" ee Nuwara Eliya. Xilliga sare ee 3200ft. Rambiyo Falls waxay u horseedaa sharaf iyo sharaf leh jasiiradan qurux badan oo samaysa Sri Lanka meel caan ah oo loogu tala-galay dalxiiska oo loo yaqaan 'escapee romantic escapee & lover nature'.
Qado iyo Casho habeenku joogayo Hotel ee Nuwara Eliya.
DAY 03: NUWARA ELIYA - BENTOTA - 240 Kms - 5.5 Saacadaha
Quraacda Hotel ee Nuwara Eliya oo tago Bentota
Qado iyo Casho habeenku joogayo Hotelka Bentota.
DAY 04: BENTOTA - COLOMBO - 65 Kms - 2 Saacadaha
Quraacda Hotel, Bentota iyo ka tagista Colombo
Mashruucyada ayaa la bilaabay si loo ilaaliyo dadweynaha duufaannada oo soo gaaraya burburinta mashaariicdaas waxaa laga helaa xeebta koonfureed ee Sri Lanka halkaas oo xayawaanku u yimaadaan si ay u dhigaan ukumaheeda. Doonta ayaa qulqulaya xeebta, waxay dhigtaa ukumaheeda waxayna daboolaysaa ciidada halkaas oo loo malaynayo, in kuleylka kulaylka qorraxda. Waxa badanaa dhacaya waa, ukumaha ayaa qodaya kalluumeysiga oo lagu iibiyo dadka iyaga ku baabbi'iya. Laakiin hadda ukumaha waxaa laga iibsanayaa mashaariicda ilaalinta, waxaana lagu daboolayaa hab dabiiciga ah oo ku yaalla aagagga ay ku jiraan shimbiraha aysan haysan fursado ah inay soo qabtaan, ilmuhuna u oggolaadaan badda dhexdeeda ka dib laba maalmood habeenkii oo bixiya iyaga fursad fiican u leh noolaanshaha.
Ku dhex mara bartamaha ganacsiga iyo bartamaha magaalada oo loo yaqaano Fort, oo ay dhiseen Bortuqiiskii qarnigii XYX. Booqo suuqyada mashquulka ah iyo badeecadaha Pettah, booqo Buddhist iyo macbudka Hindu, kaniisad old Dutch ah oo sii wadaan aagga Cinnamon Gardens. Ka gudub hoolka magaalada, xuriyada madaxa banaan iyo BMICH (Xarunta Shirarka Caalamiga ah).
Soo iibsiga; (dulsaarka)
tuso guriga guriga
Jannada RoadBare cagta
Magaaladda MajeerteenLiberty Plaza
Qado iyo Casho habeenku joogayo hoteelka Colombo.
DAY 05: COLOMBO - KATUNAYAKE - 37 Kms - 1 Hour
Quraacda Hotel Hotel ee Colombo.
Sida laga soo xigtay wakhtigaaga duulimaadku u baxayo Garoonka Caalamiga ee Bandaranaike, Katunayake for Departure. Dhammaadka safarka.